आइतवार, माघ ९, २०७८ ०२:१४:१७ युनिकोड
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना : शुक्रबार ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने शुक्रवार, कार्तिक १५, २०७६
रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, चिनियाँ राष्ट्रपति सि नेपाल आउँदा सम्झौता होला? आइतवार, आश्विन १९, २०७६
माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ ३५ प्रतिशत पूरा बिहिवार, श्रावण २३, २०७६
सेयर बजार घट्ने श्रृंखला जारी रहँदा रसुवागढी र सान्जेनको सबैभन्दा बढी कारोबार स्प्रेड गणनाको सूत्र परिवर्तन गर्दा बैंकहरुको नाफा २५% सम्मले घट्ने दाबी गरिएको छ । पुँजीकोष अनुपात बढाउने व्यवस्थाले पनि लगानी खुम्चिने उनीहरुको दाबी छ । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्चस्व रहेको सेयर बजार प्रभावित बनाएको कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका छन् । साथै, भारित औसत लागत विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणनामा निकालिएको अन्योलता समाधान भई नसकेकाले पनि लगानीकर्ता उत्साहित हुन सकेका छैनन् । बिहिवार, श्रावण २३, २०७६
रसुवागढी र सान्जेनले बल्ल सुरु गरे सेयर सूचीकरण प्रक्रिया शनिवार, श्रावण ११, २०७६
साञ्जेन र रसुवागढीको आइपीओ बिहीबार बाँडफाँड हुने साञ्जेन र रसुवागढीको आइपीओ आगामी बिहीबार बाँडफाँड हुने भएको छ । रसुवागढीको सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमल्सिनाका अनुसार दुवै आयोजनाको आइपीओ एकैसाथ बिहीबार बाँडफाँड गर्ने तयारी गरिएको हो । अहिलेको तयारीमा कुनै व्यवधान आएन भने दुवै कम्पनीको आइपीओ बिहीबार बाँडफाँड गर्ने हामीले तयारी गरेका छौ । शनिवार, बैशाख १४, २०७६
रसुवागढी र सान्जेन साधारण सेयर, ६ लाख आवेदकबाट ३ अर्ब संकलन कार्यालयस समयसम्म उक्त रकम संकलन भएको हो । सेयर भर्ने अन्तिम दिन दुवै कम्पनीका लागि ६ लाख ११ हजार आवेदकबाट ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । रसुवागढी र सान्जेनका लागि क्रमशः ९३ लाख ३९ हजार ४ सय ६७ कित्ता र ५४ लाख ७५ हजार कित्ता खरिद गर्न आवेदन मागिएको थियो । दुवै कम्पनीको सेयर भर्न बुधबार र बिहीबार दुई दिन समय थप गरिएको थियो । शुक्रवार, बैशाख १३, २०७६
सान्जेन र रसुवागढीको आइपीओ भर्ने बिहीबार अन्तिम दिन, लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै सान्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपीओ भर्ने बिहीबार (वैशाख १२ गते) अन्तिम दिन हो । यी दुवै कम्पनीको आइपीओमा बिहीबार कार्यालय समयसम्म मात्र आवेदन दिन पाइनेछ । बुधबार साँझसम्ममा दुवै कम्पनीमो उत्साहजनक आवेदन परेको छ । सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको आइपीओमा १ करोड ३४ लाख २५ हजार ८१० कित्ताका लागि आवेदन परेको हो । बिहिवार, बैशाख १२, २०७६
आइपीओ भर्न बिहीबारसम्म समय थपिएको सान्जेन र रसुवागढीमा कति पर्यो आवेदन ? मंगलबार साँझसम्ममा सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको आइपीओमा १ करोड २१ लाख कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका अनुसार २ लाख ५३ हजार जनाले १ अर्व २१ करोड रुपैयाँको सेयर भरेका हुन् । यस आधारमा सान्जेन जलविद्युतमा माग भन्दा २.४२ गुणा बढी आवेदन परेको देखिन्छ । आवेदन संख्या र रकम बढ्ने क्रम जारी छ । बुधवार, बैशाख ११, २०७६
सान्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम काठमाडौं : सान्जेन जलविद्युत कम्पनी र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपीओ भर्ने मंगलबार (वैशाख १० गते) अन्तिम दिने हो । यी दुवै कम्पनीको आइपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परिसकेकाले मंगलबार बिक्री बन्द हुन लागेको हो । मंगलबार कार्यालय समयसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सान्जेन र रसुवागढीले शुक्रबार (वैशाख ६ गते) देखि आइपीओ बिक्री खुला गरेका हुन् । दुवै कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले आइपीओ बिक्री खुला गरेका हुन् । न्यूनतम १ हजार रुपैयाँमा १० कित्ताकै लागि आवेदन दिन पाइनेछ । मंगलबार, बैशाख १०, २०७६
सान्जेन र रसुवागढीको आइपीओमा लगानीकर्ताको आकर्षण सान्जेन जलविद्युत कम्पनी र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपीओ खुलेको तेस्रो दिन पनि उत्साहजनक आवेदन परेको छ । आइतबार साँझसम्ममा सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको आइपीओमा ४८ लाख कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका अनुसार ९० हजार जनाले ४८ करोड रुपैयाँको सेयर भरेका हुन् । माग अनुसार सान्जेन जलविद्युतलाई करिब अब १ लाख ८२ हजार २५० कित्ताको मात्र आवेदन आवश्यक देखिन्छ । सोमवार, बैशाख ९, २०७६
सान्जेन र रसुवागढीको शुक्रबारदेखि आइपीओ खुल्ने न्यूनतम १ हजार रुपैयाँमा १० कित्ताकै लागि आवेदन दिन पाइनेछ । सान्जेनले कुल ५४ लाख ७५ हजार कित्ता आइपीओ जारी गर्न लागेको हो । यसमध्ये ४% (२ लाख १९ हजार कित्ता) कम्पनीका कर्मचारी र ५% (२ लाख ७३ हजार ७५० कित्ता) म्युचुअल फन्डलाई छुट्याइएको छ । बाँकी ४९ लाख ८२ हजार २५० कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । बिहिवार, बैशाख ५, २०७६
डा. प्रह्लाद योञ्जन रेडपाण्डा पदमार्ग मुलुकको तेस्रो पर्यटकीय पदमार्गको रूपमा रहेको लाङटाङ पदमार्गलाई मंगलबार प्रदेश—३ सरकारले डा. प्रह्लाद योञ्जन रेडपाण्डा पदमार्ग घोषणा गरेको हो । करिब २६ किलोमिटर यो पदमार्ग रसुवाको स्याफ्रुदेखि क्यान्जिनसम्म छ । २४ औं वन्यजन्तु सप्ताहको अवसरमा आयोजित १० औं रेडपाण्डा ट्रफी भलिबल प्रतियोगिता र सातौं लाङटाङ पर्यटन तथा संरक्षण उत्सवको मंगलबार धुन्चेमा उद्घाटन गर्दे प्रदेश—३ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले नयाँ पदमार्गको घोषणा गरेका हुन् । बिहिवार, बैशाख ५, २०७६